नेपाली क्रिकेटप्रेमीको लागि अर्को ठूलो खुसीको खबर: सन्दिप लर्डसमा हुने विश्व ११ को टिममा परे
जेठ ०२, २०७५ BNNTV
१७ वर्षीय वर्षीय नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने इंग्ल्याण्डको लर्डसमा हुने वेष्ट इन्डिजविरुद्धको विश्व ११ टोलीमा परेका छन्। सन्दिपले लर्डसमा हुने विश्व ११ टी- २० क्रिकेटमा समावेश गरिएको कुरा विश्व क्रिकेटको सर्वेच्च संस्था आइसीसीको अफिसियल वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
यतिबेला इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेल्नको लागि भारतमा रहेका सन्दिप ३१ मे मा इंग्ल्याण्डको लर्डस मैदानमा हुने टी-२० खेलका खेल्ने भएका छन् । सन्दिप इयोन मोर्गनको कप्तानीमा हुने टोलीमा सम्वेष भएका छन्। मोर्गनको कप्तानीमा रहेको यस टिमको प्लेइङ इलाभेनमा सन्दिप लामिछाने, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पाण्डेया, साहिद अफ्रिदी, तमिम इक्वाल, रासिद खान, मिचेल म्याक्लागन, सोयब मलिक, थिसारा परेरा र लुकी रोन्ची रहेका छन् । यो म्याच क्रिकेट गत वर्ष वेस्ट इन्डिजमा आएको सामुन्द्रिक आँधी (हुरिकन) कारण क्षेतीग्रस्त स्टेडियमहरु पुनर्निर्मानार्थ आयोजना गरिएको हो।
सन् २०१४ मा नेपालका पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दशानायाकेले चितवनदेखि काठमाडौँ ल्याएर प्रशिक्षण दिएपछि उनको क्रिकेटिङ करियरले निकै ठूलो छलाङ् मरेको छ। त्यसपछि उनि सन् २०१६ मा भएको अन्डर नाइन्टिन विश्वकपमा सर्वाधिक १६ विकेट लिँदै विश्व क्रिकेटमा तहल्का मच्चाएका सन्दिपले लर्डस मैदानमा यस अघि पनि खेलिसकेका छन्। उनले नेपाली टोलीले एमसीसी विरुद्धको खेलेको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीबा खेलेका थिए ।
त्यसैगरी नामेबियामा भएको डिभिजन २ को खेलमा प्रतियोगिता कै सर्वाधिक विकेट टेकर बन्दै म्यान अफ द म्याच हुँदा उनको बलिङको विश्व खुबी तारिफ भएको थियो। उनको उक्त प्रदर्शनकै कारण पनि सन्दिपले आईपीएलमा समेत छनौट भए। उनलाई दिल्लीले २० लाख भारुमा खरिद गरेको थियो। सन्दीपले आईपिएलको एघारौं संस्करणको ४५ खेलमा विराट कोहलीको टिम रोयल च्यालेञ्जर्स बैङलोर विरुद्धको खेल मार्फत डेब्यू गरेका हुन्।
उक्त खेलमा उनले चार ओभर बलिङ गर्दै २५ रन खर्चेर बैङलोरका पार्थिव पटेलको रुपमा एक विकेट समेत लिएका थिए। जुन उनको आइपिएल क्रिकेटमा पहिलो विकेटको रुपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ।
उक्त खेलमा उनले गरेको बलिङ प्रदर्शनको अहिले विश्वभर प्रसंशा भैरहेको छ। त्यसकै कारण पनि उनले बंगलादेशका स्पिनर सखिब अल हसनको स्थानमा लर्ड्समा हुने विश्व ११ टी- २० क्रिकेट खेल्ने मौका पाएका हुन्। सखिवले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले खेल्न नसक्ने भएपछि उनको ठाउँमा आइसीसीले सन्दिपलाई छनौट गरेको हो।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०२, २०७५१७:२४
मेस्सीले बनाए नयाँ रेकर्ड !
विरोधमा लियोनल मेस्सी र अर्जेन्टिनाको जर्सी जलाइए पछि अर्जेन्टिना र इजरायलको मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित !
[LIVE] सिल्हेट सिक्सर्सको टिममा सन्दिप अटाए ! सिक्सर्सले ब्याटिंग गर्दै ! यहाँ हेर्नुहोस् लाइभ !
नेपालले श्रीलङ्कालाई पनि हरायो